Beesha Caalamka oo taageertay Go'aanka Guddoonka Baarlamaanka, kana digtay Dib u dhac kale... - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Beesha Caalamka oo taageertay Go'aanka Guddoonka Baarlamaanka, kana digtay Dib u dhac kale... - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Beesha Caalamka oo taageertay Go’aanka Guddoonka Baarlamaanka, kana digtay Dib u dhac kale…
Saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa soo dhoweeyay ku dhawaaqista guddiga qabanqaabada baarlamaanka ee ah in doorashada Madaxweynaha ay dhici doonto maalinta Axadda ee 15ka bisha Maajo 2022.
“Waxaa na dhiirigelinaya horumarka wanaagsan ee laga gaaray diiwaangelinta musharrixiinta u taagan xilka madaxweynaha iyo u diyaargarowga kale ee loogu jiro inaan laga dib dhicin waqtiga kama dambeysta ah ee doorashada”. ayaa lagu yiri Qoraal ay wadajir u soo saareen wakiilada Beesha Calamaka ee Soomaliya
Beesha Caalamka waxay si toos ah u taageertay go’aanada madaxda Baarlamanaka cusub ee Federalka. “Ma jirto wax marmarsiinyo ah oo sabab u noqon karta dib u dhac kale oo dheeraad ah. Iyadoo labada Aqal ee Baarlamaankaba la dhaariyay oo si buuxda u shaqeynayaan, arrin kasta oo doorasho oo taagan waa in ay xalliyaan madaxda baarlamaanka ee sida saxda ah loo doortay.”
Waxay ku boorinayeen madaxda Soomaaliya inay si degdeg ah, nabdoon oo kalsooni ku dheehan tahay ku soo gabagabeeyaan marxaladdan kama dambeysta ah ee geeddi-socodka doorashada si loogu soo jeesto arrimaha dalka iyo dowlad-dhisidda ee mudnaanta leh.
Previous articleMasharixiinta cusub ee maalinta ugu danbeysa isu diiwaan geliyay Doorashada Madaxweyaha
Next articleWargeyso caan ah oo saadaaliyey guusha Musharax Daahir ee xilka Madaxweynaha